apreyizali umbono izangoma-yokomoya Saitama Prefecture
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ apreyizali umbono izangoma-yokomoya Saitama Prefecture
Saitama Prefecture yovavanyo umbono izangoma ngokomoya iya kusebenza njengentshayelelo inkonzo kunokwenzeka.
appraisers kunye neenkonzo enikelwe apha isishwankathelo ulwazi njongo kwi umnatha, oko akuthethi ukuba uvandlakanyo, ezifana akhabayo kunye navumelanayo. Xa
◆ tshama yokubhaka "Ebonakalayo"
Kawagoe City, Saitama Prefecture Shintomicho it is a yokubhaka. Njengoko ezivenkileni baye-apreyizali litchi ukuya yokubhaka, okwexeshana ukuba isihloko eshushu, ukuba iye kumanqaku amaninzi ezininzi kumajelo eendaba kunye like. ixabiso
na inqanaba oko ayitshintshi kakhulu nokuba kuthelekiswa imizuzu engama-30 4500 yen kuba yi 150 yen ngomzuzu, kunye jikelele zokuzilungisa ithamsanqa amabali, njl .. ixesha Appraisal kwakhona kuthatha malunga nemizuzu engama-30 kwi-mfutshane.
kunjalo ukususela kwakudala 100 yen ngomzuzu, kodwa rose, uyinxalenye yamanqaku-kunqandiwe yokunikela Japan Guide Dog Association, ukulahlwa amapolisa izilwanyana zero-inyikima uncedo yokwakha kunye like.
Ukongeza-apreyizali umbono ngokomoya, nayo uthengisa ezifana Power Stone nesacholo, Ngaba icebiso ukhethe lowo yaba urhulumente umphefumlo umthengi lowo.
Ikhaya page has a 'Siyavuma ugcino ngalinye iinyanga ezintathu ngoku, "kodwa, le akuyona i impazamo" kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo ", hit ayaziwa. Uyacelwa ukuba unomdla try ningabuzi ngokwakho.
◆ Shibuya Reika uMnu
kubantu ukufunda umsebenzi njengoko iminyaka emi-5 UMiko e Aomori, ngoku Nonhlanhla kunye nengcali umbono ngokomoya e Tokyo, Saitama, Chiba, Ibaraki, Gunma. UMoya abanokukhubazeka thethwano nabo bayamkela. Uthethwano ezimotweni kusetyenziswa ngexesha zokuthenga kunye neempawu siphene psychological (Iwakutsuki iipropati) Kubonakala ukuba abaninzi.
mali yi 5000 yen kanye. Ukuba iiyure ezingaphezu kwe-2 kukuba kubalwa ngo-1000 yen, kodwa ayaziwa idityaniswa 1000 yen zonke inani imizuzu. Oko Wathi
, ukuze ukwazi ukufunda njalo-5000 yen ukuya kwiiyure ezimbini kangangoko ukufunda inkcazelo site, bekuya bathi iseti kakhulu yesazela ukuba.
uHiroshi Koizumi, abathe baba ngaphezu amava ngokomoya ukusuka ebuntwaneni Hiki-umpu, Saitama Prefecture ukuphiliswa ngokomoya e Ogawa, iingcebiso ngokomoya thina .
Imali ye ingcebiso ngokomoya iyure-1 10000 yen, kukuba ibe Tsude 2 30 imizuzu imibuzo njengesikhokelo.
uHiroshi Koizumi, abathe baba ngaphezu amava ngokomoya ukusuka ebuntwaneni Hiki-umpu, Saitama Prefecture ukuphiliswa ngokomoya e Ogawa, oko iingcebiso ngokomoya.